डा. अम्बेडकरले काठमाडौं आएर भनेका थिए, ‘मार्क्स होइन, बुद्ध सही छन्’
विभूति शर्मा काठमाडौं, २३ वैशाख
हिन्दु धर्ममा मानिने भगवानका नवौँ अवतार मानिने भगवान गौतम बुद्धका विचार र सिद्धान्त आधुनिक युगमा सबैभन्दा बढी प्रासङ्गिक मानिरहिएका छन् । सारा विश्वमा बुद्धका विचारको प्रासङ्गिकतामाथि निकै ठूला विमर्श कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । भारतमा पनि भगवान बुद्धप्रति सम्मान प्रकट गर्ने र उनका अनुयायीको संख्या निकै छ ।
स्वतन्त्र भारतको संविधानका सूत्रधार डा. भीमराव अम्बेडकरले १४ अक्टुबर १९५६ मा बुद्ध धर्म स्वीकार गरेर बुद्ध मतका अनुयायी बने । अम्बेडकरका साथ महार जातिका अनगिन्ती मानिसले पनि आफूलाई बुद्ध धर्मका अनुयायी बनाए । आज लाखौँको संख्यामा भारतमा जातिगत दलित समाज छ र अधिकांश दलित समाजले आफूलाई बुद्धका अनुयायी बताउँछन् । विशेषगरी महाराष्ट्रमा बुद्ध अनुयायीको संख्या धेरै छ ।
भगवान बुद्धको जीवन र सन्देश जति सहज लाग्छ, त्यसको अनुसरण उति नै कठिन छ । समाजमा फैलिएका हिंसा र अनैतिकतालाई समाप्त पारेर आदर्श र शान्तिको मार्ग देखाउने भगवान बुद्धको प्रासङ्गिकतालाई के हामीले बुझेका छौँ ? के बुद्ध धर्मका अनुयाीि तथा भारतीय समाज उनका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिरहेको छ ? यो चिन्तनको विषय हो ।
किनभने वर्तमान भारतमा अम्बेडकरको फोटोलाई सामुन्ने राखेर मार्क्सवादको ढोल पिटिइरहिएको छ । आफूलाई अम्बेडकरका अनुयायी मान्ने मानिस आज राजनीतिक षड्यन्त्रमा फसिरहेका छन् । दलित समाजको जातिगत राजनीतिमा भगवान बुद्धका सन्देश मधुरा हुँदै गएका छन् । यस कारण अम्बेडकरलाई वर्तमानमा बढी सम्झिइरहिएको अवस्था छ ।
अम्बेडकरले सन् १९५६ अक्टुबरमा बुद्ध धर्म अवलम्बन गरे । यसको झ०डै २ महिनापछि उनको निधन भयो । अम्बेडकर अरू केही वर्ष बाँचेका भए गरिब, अनपढ, बञ्चित, शोषित, पीडित र दलित समाजका बीच भगवान बुद्धका सन्देश सहज र सरल तरिकाले पुर्‍याउने थिए । तर, यो सौभाग्य सबैले पाएनन्, उनी बुद्ध धर्म अँगालेको २ महिनामै बिते ।
यद्यपि, डा. अम्बेडकरको एउटा भाषण यहाँ स्मरणयोग्य छ, जुन २५ सय वर्षअघिका बुद्ध र २ सय वर्षअघिका कार्ल मार्क्सका बारेमा छ ।
२९ नोभेम्बर १९५६ मा नेपालको काठमाडौंमा ‘वर्ल्ड बुद्धिष्ट कन्फरेन्स’मा डा. अम्बेडकरले ‘बुद्ध या कार्ल मार्क्स’ शीर्षक ऐतिहासिक भाषणमा भगवान बुद्धका पञ्चशील, अष्टाङ्ग मार्ग तथा अहिंसा र न्यायको सम्बन्धमा प्रस्ट पारेका छन् । उनले विश्वलाई नै बताएका छन् कि कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तले विश्वको कल्याण गर्न सक्दैनन् ।
उनले भनेका छन्, ‘भगवान बुद्धको समतावादी आदर्श र मार्क्सको साम्यवादको तुलनात्मक विश्लेषणबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि भगवान बुद्धका विचारले समाजलाई उत्थान र विश्वको कल्याण गर्न सक्छ, नकि मार्क्सको सिद्धान्तले ।’
अम्बेडकरले उक्त भाषणमा भनेका छन्, ‘मार्क्स धेरै आधुनिक र बुद्ध धेरै पुरातन छन् । मार्क्सवादीहरूले यसो भन्न सक्छन् कि मार्क्सका गुणका तुलनामा बुद्ध केवल आदिम र अपरिष्कृत ठहर्छन् । फेरि यी २ व्यक्तिका बीच के समानता या तुलना हुन सक्छ ? एक जना मार्क्सवादीले बुद्धबाट के सिक्न सक्छ ? बुद्धले एक जना मार्क्सवादीलाई के शिक्षा दिन सक्छन् ? फेरि पनि यी २ बीच तुलना निकै शिक्षाप्रद र आकर्षक हुनेछ । यस कारण यी २ बीच तुलना गर्ने विचार आयो ममा । यदि मार्क्सवादीले आफ्ना पूर्वाग्रहहरूलाई पछाडि राखेर बुद्धको अध्ययन गरेमा यी कुराहरू बुझ्न सक्छ, जुन उनले भनेका छन् र जसका लागि उनले सङ्घर्ष गरे । मलाई यकिन छ कि उनीहरूको दृष्टिकोण पक्कै बदलिनेछ ।
वास्तवमा उनीहरू (मार्क्सवादी)बाट यो आशा गर्न सकिँदैन कि बुद्धलाई हँसी मजाक गर्ने वा उडाउने काम उनीहरूले बन्द गर्नेछन् तर योचाहिँ भन्न सकिन्छ कि उनीहरूलाई बुद्धका शिक्षा र उपदेशमा केही यस्ता कुरा छन्, जसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ र यी धेरै लाभप्रद छन् ।’
डा. अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बुद्धको नाम सामान्यतयाः अहिंसाको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ । अहिंसालाई नै उनको शिक्षा र उपदेशको समग्र सार मानिएको छ । त्यसैलाई उनको प्रारम्भ र अन्त्य मानिएको छ । बहुत थोरै व्यक्तिले मात्र यस तथ्यलाई बुझेका छन् कि बुद्धले जुन उपदेश दिएका छन्, ती धेरै व्यापक छन्, अहिंसाभन्दा धेरै बढी छन् ।’
बुद्ध धर्मको मुख्य ग्रन्थ ‘त्रिपिटक’को अध्ययन गरेका अम्बेडकरले उक्त भाषणमा भगवान बुद्धका सिद्धान्तहरूलाई विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गरेका छन् । भगवान बुद्धका सिद्धान्तको चर्चा गर्दै अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘मुक्त समाजका लागि पन्थ अर्थात् ‘रिलिजन’ आवश्यक छ । प्रत्येक पन्थ अङ्गीकार गर्न योग्य हुन सक्दैनन् । ईश्वरलाई पन्थको केन्द्र बनाउन अनुचित छ । आत्माको मुक्ति वा मोक्षलाई पन्थ वा ‘रिलिजन’को केन्द्र बनाउनु उचित होइन । पशुबलिलाई पन्थको केन्द्र बनाउनु पनि अनुचित हो । वास्तविक पन्थको वास मनुष्यको हृदयमा हुन्छ, शास्त्रहरूमा होइन । पन्थको केन्द्र मनुष्य तथा नैतिकता हुनुपर्छ । यदि यसो होइन भने पन्थ एउटा क्रूर अन्धविश्वास मात्र हो ।’
उनले भनेका छन्, ‘पन्थको काम विश्वको पुनर्निर्माण गर्नु तथा विश्वलाई प्रसन्न राख्नु हो, विश्वको उत्पत्ति र अन्त्यको व्याख्या गर्नु होइन । संसारमा दुःख स्वार्थको टकरावका कारण हुन्छ र यसको समाधानको एक मात्र तरिका अष्टाङ्ग मार्गको अनुसरण नै हो ।’
भगवान बुद्धका अनुयायीमा मानवीय गुणको महत्त्वलाई प्रस्ट पार्दै अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘सबै मानव प्राणी समान छन् । मनुष्यको मापदण्ड उसको गुण हुने गर्छ, जन्म होइन । जुन चिज महत्त्वपूर्ण छ, त्यो उच्चआदर्श हो, नकि उच्चकुलमा जन्मिनु । सबैप्रति मैत्रीभाव, साहचर्य र भाइचारा कायम राख्नु जरुरी छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्तिको अधिकार हुनुपर्छ । मनुष्यलाई जीवित रहन शिक्षाको उति नै आवश्यकता छ, जति खानाको । राम्रो आचरण नभएको ज्ञान खतरनाक हुन्छ । युद्ध यदि सत्य तथा न्यायका लागि नभए, त्यो अनुचित हो । पराजितप्रति विजेताका पनि कर्तव्य हुने गर्छन् ।’
उनको भनाइ छ, ‘भगवान बुछका सिद्धान्त जति पुराना छन्, उति नै नयाँ पनि । उनका उपदेश निकै व्यापक र गम्भीर पनि छन् ।’
कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त
कार्ल मार्क्सको मूल सिद्धान्तको विवेचना गर्दै अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘यसमा शंका छैन कि मार्क्स आधुनिक समाजवाद वा साम्यवादका जनक हुन् । मार्क्सको सिद्धान्त जति पुँजीपतिहरूका विरुद्ध थियो, उति नै ती मानिसका विरुद्ध पनि थियो, जसलाई उनी स्वप्नदर्शी वा अव्यावहारिक समाजवादी भन्थे । उनी यी दुवैलाई मनपराउँदैनथे ।’
अम्बेडकरका अनुसार मार्क्सको सिद्धान्तले भन्छ कि एउटा वर्गको अर्को वर्गसँग स्वार्थ वा हितको टकराव र सङ्घर्ष हुने गर्छ । सम्पतिमा व्यक्तिगत स्वामित्वबाट एउटा वर्गलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ र अर्को वर्गलाई शोषण गरेर दुःख दिने गर्छ पहिलो वर्गले । समाजको भलाइका लागि व्यक्तिगत सम्पतिलाई उन्मूलन गरेर दुःखको निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सको मान्यता छ ।
अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर जुनबेला प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यही समयबाट यसको प्रशस्त आलोचना पनि भइरहेको छ । यस आलोचनाको फलस्वरूप मार्क्सद्वारा प्रस्तुत विचारधाराको ठूलो ढाँचा ध्वस्त भइसकेको छ । यसमा कुनै शंका छैन कि मार्क्सको यो दाबी अर्थात् समाजवाद अपरिहार्य छ भन्ने भनाइ पूणतयाः असत्य सिद्ध भएको छ । सर्वहारा वर्गको तानाशाही सर्वप्रथम सन् १९१७ मा, उनको पुस्तक दास क्यापिटल, समाजवादको सिद्धान्त प्रकाशित भएको झण्डै ७० वर्षपछि एउटा देशमा स्थापित भएको थियो । यहाँसम्म कि साम्यवाद, जुन सर्वहारा वर्गको तानाशाहीको अर्को नाम हो, रुसमा आयो तर त्यो कुनै प्रकारको मानवीय प्रयासविना कुनै अपरिहार्य वस्तुका रूपमा होइन । त्यहाँ एउटा क्रान्ति भएको थियो र यसका रूपमा आउनुअघि ठूलो रक्तपात भएको थियो अनि अत्यधिक हिंसाका साथ योजनाबद्ध तरिकाले क्रान्ति भएको थियो । बाँकी विश्वमा अहिले पनि सर्वहारा वर्गको तानाशाही (शासन) आउने प्रतीक्षा बाँकी नै छ ।’
बुद्ध र मार्क्सका साधनबीच तुलना
‘भगवान बुद्धले साध्यको प्राप्तिका लागि जुन साधन बताएका छन्, ती पञ्चशील र आर्य अष्टाङ्ग मार्ग हुन्, जबकि मार्क्सको साम्यवादको लक्ष्यको साधन हिंसा हो ।’
अम्बेडकरले दुःखको निराकरणका लागि पञ्चशीलका आचरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । भगवान बुद्धको पञ्चशीलमा निम्न कुरा बताइएको छ ।
क) कुनै जीवित वस्तुलाई नास नगर्नू/कष्ट नदिनू ।
ख) चोरी अर्थात् अर्काको सम्पतिमा धोखाधडी वा हिंसाद्वारा नहत्याउनू/त्यसमाथि कब्जा नजमाउनू ।
ग) झूठ नबोल्नू ।
घ) तृष्णा नराख्नू र,
ङ) मादक पदार्थ सेवन नगर्नू ।
अम्बेडकरका अनुसार बुद्धको मत छ कि संसारमा केही कष्ट वा दुःख मान्छेले मान्छेप्रति गर्ने पक्षपात हो । यस पक्षपातलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ ? मनुष्यप्रति मनुष्यको पक्षपात निराकरण गर्नका लागि बुद्धले आर्य अष्टाङ्ग मार्ग निर्धारण गरेका छन् । उक्त अष्टाङ्ग मार्गका तत्त्व यस प्रकार छन् :
क) सम्यक दृष्टि, ख) सम्यक सङ्कल्प, ग) सम्यक बचन, घ) सम्यक आचरण, ङ) सम्यक आजीविका, च) सम्यक प्रयत्न, छ) सम्यक स्मृति र ज) सम्यक समाधि ।
अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘यस आर्य अष्टाङ्ग मार्गको उद्देश्य पृथवीमा धर्मपरायणता तथा न्यायसङ्गत राज्यको स्थापना गर्नु तथा त्यसद्वारा संसारका दुःख तथा विषादलाई मेटाउनु हो । प्रत्येक व्यक्तिले यी गुणलाई आफ्नो पूर्ण सामथ्र्यका साथ व्यवहारमा अपनाउनुपर्छ । यो नै त्यो सिद्धान्त हो, जुन बुद्धले संसारमा दुःख तथा क्लेशलाई समाप्त पार्न आफ्नो बोध र ज्ञानको परिणाम स्वरूप प्रतिपादन गरेका हुन् ।’
अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बुद्धले जुन साधन अपनाए, ती स्वेच्छापूर्वक अनुसरण गरेर मनुष्यको नैतिक मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नका लागि थिए । जबकि साम्यवादी भन्छन् कि साम्यवाद स्थापना गर्न २ वटा मात्र साधन छन्, पहिलो हो हिंसा । वर्तमान व्यवस्थालाई भङ्ग गर्न वा तोड्नका लागि हिंसाभन्दा कम कुनै पनि काम वा योजना पर्याप्त हुँदैन । अर्को साधन सर्वहारा वर्गको शासन हो । नयाँ व्यवस्थालाई जारी राख्नका लागि यसभन्दा अर्को कुनै कुरा पर्याप्त हुँदैन ।’
अम्बेडकरले समताको कुरा बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स दुवैले भनेका बताउँछन् । तर, दुवै साधनमा धेरै फरक र विषमता छन् । तथापि, साध्य दुवैका समान छन् ।
बुद्ध र मार्क्सका साधनहरूको मूल्याङ्कन
अम्बेडकरले आफ्नो उक्त भाषणमा बुद्ध र मार्क्सका साधनहरूको मूल्याङ्कन गर्दै विवेचना गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो कुरा हेर्नुपर्छ कि कसका साधन श्रेष्ठ तथा दीर्घकालसम्म रहने वा स्थायी रहने खालका छन् ।’
अम्बेडकर प्रश्न गर्छन्, ‘साधनहरूको मूल्य के हो ? कसका साधन अन्ततः श्रेष्ठ तथा स्थायी छन् ? के साम्यवादीले यो भन्न सक्छन् कि आफ्ना मूल्यवान् साध्य प्राप्त गर्न उनीहरूले अन्य मूल्यवान् साधनलाई नष्ट गरेका छैनन् ? उनीहरूले निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गरेका छन् ।’
अम्बेडकरले यो कुरा जोड दिँदै भनेका छन्, ‘साम्यवादीहरूले आफ्नो साध्य र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि थाहा छ कति मानिसको हत्या गरेका छन् ? के मानव जीवनको कुनै मूल्य छैन ? के उनीहरू कसैको जीवन नलिई लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् ? शासकको साध्य र लक्ष्य क्रान्तिलाई स्थायी क्रान्ति बनाउने हुनुपर्छ । यो एउटा मूल्यवान् साध्य हो तर के साम्यवादी यो भन्न सक्छन् कि यस साध्यलाई प्राप्त गर्न उनीहरूले अन्य मूल्यवान् साध्यलाई नष्ट गरेका छैनन् ? साम्यवादी शासनमा तपाईंको केवल कर्तव्य हुन्छ, तपाईंले कानुन पालना गर्नुहोस् तर शासन र शासकको आलोचना गर्ने कुनै अधिकार तपाईंमा हुँदैन । जबकि बुद्ध यो चाहन्थे कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूपमा यति प्रशिक्षित हुनुपर्छ कि ऊ स्वयं धर्मपरायणता र न्यायसङ्गतताको प्रहरी बनोस् ।’
अम्बेडकर भन्थे, ‘जहाँसम्म हिंसाको सम्बन्धको कुरा छ, हिंसाको नाम सुन्दै धेरै मानिस थर्कमान बन्छन् तर यो खालि भावुकता हो । हिंसालाई पूर्णतया त्याग गर्न सकिँदैन । यहाँसम्म कि गैरसाम्यवादी देशहरूमा पनि हत्यारालाई फाँसीमा चढाइन्छ । के फाँसीमा झुण्ड्याउनु हिंसा होइन ? गैरसाम्यवादी देश एकअर्काका साथ युद्ध गर्छन् । युद्धमा लाखौँ मानिस मारिन्छन् । के यो हिंसा होइन ? यदि एउटा हत्यारालाई यस कारण मारिन्छ, किनकि उसले अर्को एक नागरिकलाई मारेको छ, उसको हत्या गरेको छ, यदि एउटा सिपाहीलाई युद्धमा यस कारण मार्न सकिन्छ, किनकि ऊ शत्रु राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ भने यदि सम्पत्तिका मालिक सम्पत्तिको मालिक हुनेकै कारण बाँकी मानव जातिलाई दुःख दिन्छ भने उसलाई किन नमार्ने ?’
अम्बेडकर भगवान् बुद्धको अहिंसाको अवधारणालाई प्रस्ट पार्दै भन्छन्, ‘बुद्ध हिंसाका विरुद्ध थिए तर उनी न्यायका पक्षमा पनि थिए र जहाँ न्यायका निम्ति बल प्रयोग अपेक्षित हुन्छ, त्यहाँ उनले बल प्रयोग गर्ने अनुमति दिएका छन् ।’
बुद्ध पूर्णतः समतावादी
अम्बेडकरका अनुसार भगवान् बुद्ध पूर्णतः समतावादी थिए । उनी भन्थे कि एक पटक बुद्धकी आमा महाप्रजापति गौतमीले, जो भिक्षुणी संघमा सामेल भएकी थिइन्, सुनिन् कि बुद्धलाई चिसो लागेको छ । उनले बुद्धका लागि न्यानो कपडा तयार पारिन् र बुद्धलाई दिइन् । बुद्धले उक्त कपडा पहिरिन इन्कार गरे । उनले यदि यो उपहार हो भने संघका सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले यस्तो उपहार एक जनालाई मात्र दिइनु नहुने बताए ।
अम्बेडकरले भने, ‘भिक्षु संघको विधान सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधान थियो । बुद्ध संघका भिक्षुहरूमा सबै भिक्षुहरू मात्र थिए । उनीहरू शासक थिएनन् । बसद्धको मृत्युअघि पनि धेरै पटक संघलाई नियन्त्रण गर्न र नेतृत्व गर्न कसैलाई जिम्मेवारी दिने कुरा उठ्यो तर बुद्धले उक्त कुरा मानेनन् । उनले धम्मलाई नै संघको सर्वोच्च सेनापति माने । शासक बन्ने वा कोही नेता नियुक्त गर्नेमा उनको सहमति रहेन ।
अम्बेडकर भन्छन् कि बुद्धले संघमा नेतृत्वविहीन साम्यवादको स्थापना गरेका थिए । यो हुन सक्छ कि उक्त साम्यवाद सानो ठाउँमा वा निश्चित क्षेत्रमा थियो होला तर उनले नेतृत्व वा शासकविहीन साम्यवाद स्थापना गरेका थिए, जुन एउटा चमत्कार थियो ।
बुद्धको तरिका साम्यवादीको भन्दा विलकुल फरक
बुद्धको तरिका फरक थियो । उनको तरिका मनुष्यको मनलाई परिवर्तन गर्ने, उसको प्रवृत्ति र स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने थियो ताकि मनुष्यले जे गर्छ, उसले स्वेच्छाले बल प्रयोग वा बाध्यताविना गरोस् भन्ने छ । मनुष्यको चित्तवृत्ति र स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने उनको मुख्य साधन उनको धम्म वा धर्म थियो तथा धम्मका विषयमा उनका निकै उपदेश थिए ।
बुद्धको तरिका मानिसलाई तिनका काम गर्नका लागि, उसले जे गर्न चाहँदैन, त्यो काम गर्न बाध्य गर्नु थिएन, चाहे त्यो उनका लागि राम्रो मानियोस् ।
अम्बेडकर भन्थे कि साम्यवादीहरूको दृष्टिमा धर्म (धम्म) अभिशाप हो । उनले भनेका छन्, ‘धर्मप्रति उनीहरूमा यति गहिरो घृणा थियो कि साम्यवादीहरूका लागि सहायक धर्म तथा जुन उनीहरूका लागि सहायक छैनन्, ती धर्मका बीच पनि भेद गर्दैनन् । साम्यवादीले इसाई मतप्रति आफ्नो घृणा बौद्ध धर्मसम्म लिएर आएका छन् ।’
अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘मानवताका लागि आर्थिक मूल्यको आवश्यकता मात्र हुँदैन, त्यसका लागि अध्यात्मिक मूल्य पनि बनाइरहनुपर्ने हुन्छ । स्थायी शासनले अध्यात्मिक मूल्यतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन र उनीहरू यतातर्फ ध्यान दिन चाहँदैनन् पनि । मनुष्यको विकास भौतिक रूपका साथै अध्यात्मिक रूपले पनि हुनुपर्छ ।’
अम्बेडकर भ्रातृत्व, स्वतन्त्रता तथा समानता, यी तीनै कुरा तब मात्र विद्यमान रहन सक्छन्, जब बुद्धको मार्गलाई अनुसरण गरिन्छ ।
(लखेश्वर चन्द्रवंशी ‘लखेश’को लेखको अनुवाद)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २३, २०७७, १७:३३:००
राजा वीरेन्द्रले सोफाबाट उठेर ‘हग’ गर्दाको त्यो क्षण
भारतमा फेरि आँधीको खतरा, कैयौँ गाउँ खाली गराइयो
खेलका क्रममा जर्ज फ्लोइडलाई न्याय माग्ने खेलाडीलाई कारबाही नहुने